Agoosto 26, 2019 7:59 g 1
Radio Daljir oo xoogga saaraya, siina xoojinaya soo gudbinta wararka iyo waraysiyada iftiimaya xaaladihii ugu danbeeyey ee Dowlad Deegaanka Soomaalida (DDS), waxa aan asbuuc walba idiin soo gudbinayaa warar joogta ah oo ka warrama marxaladihii ugu danbeeyey ee deegaanka, dhan siyaasad iyo dhan dhacdooyin deegaanba.
1) August 20 – Degmada Qamuda ee Gobolka Doollo waxaa ka dhacay dagaal u dhexeeya labo maleeshiyo beeleed waxaana dagaalka ku dhintay hal qof. Iska horimaadka oo u dhaxeeya labada maleeyshiyo beeleed ayaa salka ku haya lahaanshiyaha Dhul ay isku haystaan ayada oo ay deegaanka Soomaalida hadda weerar ku yihiin qowmiyadda Oramada oo Soomaalida ku wadda barakicin baahsan.
2) August 20 – Isla degmada Qamuda ee gobolka Doollo waxaa lagu xiray 15 qof oo u xiran Liyuu Booliska loona taxaabay xero ciidan oo Liyuu Booliska ay ku leyihiin degmada Yucub oo 35 kilometer u jirto degmada Qamuda. Xiritaanka dadkan ayaa salka ku haysa dagaal beeleedka ka holcaya deegaanka iyo sidii looga hortagi lahaa.
Maxamed Dahir, Adan Dhaga Sood, Xuseen Cali Baadi, Farax Dhurwa, Xamdi Adan, iyo Ahmed Maxamed Muuse waxa ay kamidyihiin dadka lagu xiray degmada Qamuda.
3) August 20 – Degmada Tulliguuleed ee gobolka Fafaan waxaa weerar lixaad leh ku soo qaaday maleeyshiyaadka Oromada oo kaashanaya ciidamada Itoobiya, sidii aan hore u soo warineyna waxa ay jirdil ba’an u geysteen guddomiyaha degmada Tuliguuleed oo weli ku jira xaalad kooma.
Isla Tulliguuled oo hadda gacanta ugu jirta militariga Itoobiya gacanna siinaya maleeshiyaadka Oromada ayaa weerar xoggan waxaa lala beegsaday shacab barakacyaal oo deggan duleedka Tulli.
Waxaa xusid mudan in Wasiirka cusub ee Gaanshaandhigga Itoobiya Lemma Megresa ahaan jirey Madaxweynihii hore ee kilalka Oramada oo ku soo caanbaxay siyaasaddiisa barakicinta Soomaalida. Wasiirka Difaaca Lemma Megresa oo hadda kaashanaya maleeshiyaadka Oramada ayaa si toos ah u bilaabay barakicinta Soomaalida gobolka Fafaan iyo caasimada Jigjiga asaga oo badanaa degmooyinka Tulliguuleed ku wareejiyey qowmiyaddiisa Oramada.
Masuuliyiinta DDS iyo Madaxweyne Mustafe Cagjar ayaan illaa iyo hadda wax war ah ka soo saarin duullaanka cusub ee Wasiirka Difaaca oo adeegsanaya cududda militari ee Itoobiya iyo waliba taageerayaashiisa maleeshiyaadka Oramada.
4) August 24 – Tuulada Karan Bilcile oo ka tirsan magalaada Qabridahare ee gobolka Qoraxay ayaa waxaa ka dhacay banaanbaxyo looga soo horjeedo maamuulka magalaada Qabridahare. Shacabka tuulada Karin Bilcile ee magalaada Qabridahare ayaa dalbanaya caddaalad islamarkaana sheegey in qaabka saamiqaybsiga maamulka Qabridahar ee maanta uu yahay mid ku salaysan cadaaladdarro.
Dowlad Deegaanka Soomaalida 208 Wararka 19919
Yoji 10 months ago
Adun ka wax walba way ka dhacan.oromada,dowlada itobiya iyo madax isku sheega maqar saarka. Ee liyuga xukuma. Intuba wa in isku meel loga sojesta. Iskusoo wada duub gobal kaas iyo guud ahaana somalido dhan waxay wajahayan xalad dagaalo dhul balaarsiya.